Qofkii ka dambeeyay qaraxii Biskopsgården oo weli la raadinayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Booliska oo weli raadinaya dadkii ka dambeeyay qaraxii xaafada Hisingen. sawir: Björn Larsson Rosvall/TT
Qofkii ka dambeeyay qaraxii Biskopsgården oo weli la raadinayo
La daabacay tisdag 23 augusti 2016 kl 13.30
Weli boolisku ma qaban qofkii ama dadkii ka dambeeyay qaraxii axadii habeenimo ka dhacay guri ku yaala xaafada Biskopsfården ee magaalada Göteborg halku inan 8 jir ah ka dhintay dhaawaci halkaas soo gaadhay.
Sido kale ayaaney dadka xaafada Biskopsgården degan warbixin ku saabsan qofkii amba dadka ay iyagu ka shakiyeen in ay ka dambeeyay qaraxan u gudbin booliska. Booliska xaafadan ayaa sheegay in ay yaryihiin tirada qof ee iyaga la soo xidhiidhay.
-Wexey ila tahay in ay jiraan dad xaafadan degan oo og qofkii amba dadkii ka dambeeyay bamkii gacmeed ee lagu soo turay gurigan, ayuu sheegay Thomas Fuxborg oo qeeybta saxaafada u qaabilsan booliska magaalada Göteborg.
In kasta oo ay dhowr kamaradood ku xidhnayeen halku qaraxu ka dhacay, boolisku weli ma helin warbixin iyaga ka caawin karta baadhitaankan.
8 jirka ku dhintay qaraxan ayaa Iswiidhan booqasho ku joogay ahna muwaadin Boqortooyada Ingiriiska ah. Booliska ayaa hadda u maaleeynaya in u qaraxani xidhiidh la leeyahay xabadeeyntii ka dhacday suuqa Vårvädertorget oo isla xaafadan ku yaala, halku mid ka mid ah kuwi dhacdodan lugu xukumay ku noola isla guriga bamka lagu soo tuuray axadii.